संसारकै धनी गाउँ, जहाँका सबै मान्छे करोडपति छन् - नागरिक रैबार
शनिबार, साउन २, २०७८
प्रायः हामी संसारका सबैभन्दा धनी मानिसहरुकेा बारेमा चर्चा गर्दछौँ । तर के तपाईंले यस्तो गाउँको बारेमा सुन्नुभएको छ, जुन धनीहरुले भरिएको छ ?
हो, संसारमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँका हरेक मानिसहरुको बैंक एकाउन्टमा करोडौँ रकम मौज्दात छ । उक्त गाउँमा दुनियाँका जुनसुकै सम्वृद्ध शहरलाई माथ लिने सुख सुविधा उपलब्ध छ ।
संसारको सबैभन्दा धनी यो गाउँ चीनको जियांग्सू प्रान्तमा रहेको छ । उक्त गाउँको नाम वाक्सी हो । चीनको यो गाउँ यस्तो छ कि त्यहाँ पुग्दा जोकोहीले पनि देशको राजधानीमा जस्तै सुविधाहरु सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्दछ ।
यो गाउँमा उपलब्ध सुखसुविधाका कारण यसलाई सुपर भिलेजको नामले पनि चिनिन्छ । उक्त गाउँमा ७२ तले गगनचुम्बी महल रहेको छ । त्यस्तै हेलिकप्टर टेक्सिस, थीम पार्क तथा लक्गरी भिल्ला पनि छन् ।
यस गाउँमा करीब दुई हजार मानिसको बसोबास छ । सो गाउँका बासिन्दाहरुका अनुसार त्यहाँका हरेक मानिसको बैंक खातामा कम्तिमा पनि १० लाख युआन अर्थात् झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ ।
साथै गाउँका हरेक परिवारलाई सरकारको तर्फबाट घर दिइएको छ । यदि कोही मानिसले गाउँ छाड्न चाहेमा आफ्नो सम्पत्ति र सुखसुविधा सबै त्याग गर्नुपर्दछ । त्यसैले पनि सो गाउँमा मानिसहरु कहीँपनि बसाईं नसरिकन सुखसयलका साथ जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
वाक्सीलाई करोडौँ डलरको कम्पनीहरुको गढ पनि मानिन्छ । त्यहाँ स्टिल तथा सिपिङ्ग जस्ता मूख्य-मूख्य कम्पनीहरु रहेका छन् । गाउँका सबैजसो घरहरु एकै प्रकारका छन् । बाहिरबाट हेर्दा त्यो कुनै विशाल होटल परिसर जस्तै लाग्दछ ।
टिलिक्क टल्किने गाउँको सडकले जोसुकैलाई पनि आकर्षिक गर्दछ । अहिले सम्वृद्धिको शिखरमा पुगेको यो शहर कुनै समय निकै गरीब थियो । गाउँलाई प्रगति र सम्वृद्धिको चुलीमा पुर्‍याउने श्रेयचाहिँ कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय सचिव वू रेनाबोलाई जान्छ ।
अत्याधिक रक्तश्रावका कारण सुत्केरीको मृत्यु
२४ घण्टामा १८ सय बढी कोरोना संक्रमित थपिए, २१ सय बढी संक्रमणमुक्त
इतिहासको अनौठो युद्ध : एक बाल्टिनका लागि दुई देशबीच घमासान लडाइँ
विश्वको इतिहासमा विभिन्न खतरनाक युद्धहरु हुँदै आएका छन् जसमा ठूलो धनजनको क्षति पनि हुने गरेको छ । प्राचीन इतिहासमा राज्य विस्तार तथा सत्ता कब्जालगायतका मनसायबाट विभिन्न राज्यहरुबीच युद्ध हुने गरेको इतिहास छ । तर आजभन्दा ७०० वर्ष अगाडि एउटा यस्तो युद्ध भयो जसको कारण केवल एउटा बाल्टिन मात्र थियो । उक्त घटना सन् १३२५ को […]
जहाँ औषधिले होइन शरीरमा आगो लगाएर गरिन्छ उपचार !
काठमाडौं । अहिलेसम्म त तपाईले औषधि तथा जडिबुटीबाटै विरामीको उपचार गरेको देख्नु तथा भोग्नुभएको छ होला । तर छिमेकी मुलुक चीन चाँहि विरामीको शरीरमा आगो लगाएर समेत उपचार गर्ने चलन रहेको छ । बिरामीको जिउमा आगो लगाएर रोगको उपचार गर्ने यो विधिलाई ‘फायर थेरापी’ भनिन्छ । जुन पछिल्लो १ सय वर्षदेखि चीनमा परम्परागत उपचार पद्धतिको […]
काठमाडौं । रुसी अधिकारीहरुले सयौँ हजार डलरको घुसकाण्डको पर्दाफास गरेका छन् । उक्त काण्डमा कैयन् ट्राफिक प्रहरीहरु संलग्न रहेका छन् । तर ट्राफिक पुलिसका प्रमुखको घरमा रहेको शौचालयले सबैको ध्यान तान्यो । किनकी ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको घरमा रहेको उक्त ट्वाइलेट सुनबाट बनेको थियो । विज्ञापन द मस्को टाइम्सका अनुसार ती पुलिस अधिकारी अलेक्सी सफोनोभलाई […]
संसारका हरेक देशमा अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष कानून बनाइएको हुन्छ । कुनै पनि अपराधीलाई उसको अपराधका लागि कानून बमोजिम सजाय दिइन्छ, चाहे सानो होस् वा ठूलो । कुनै अपराधका लागि अपराधीको अभियोग ठहर भएसँगै जेल सजाय र जरिमाना पनि हुन्छ । कतिपय मुलुक तथा ठाउँहरुमा भने यस्ता अनौठो खाले कानून हुन्छन् जसले अपराधीलाई निकै रोचक […]
यी लक्षणबाट थाहा हुन्छ डिप्रेसनको समस्या
नेपाली समाजमा डिप्रेसनको समस्या भयावह बन्दै गएको छ । डिप्रेसनको शिकार भएका कतिपयले आत्महत्यासम्मको बाटो रोजेका छन् । डिप्रेसनग्रस्त मानिसले आत्माहत्या गर्नुको मूख्य कारण नै डिप्रेसन हो । मुटु रोगपछि डिप्रेसन विश्वको दोस्रो ठूलो समस्या हो । डिप्रेसन मूलत: मानसिक समस्या हो । डिप्रेसन पैदा गराउने कारण भने मानसिक मात्र हुँदैन । शारीरिक कारणले समेत […]
९१ घण्टामा १०७ बच्चा जन्माएर अमेरिकी अस्पतालले राख्यो कीर्तिमान
अमेरिकाको टेक्सासस्थित एक महिला अस्पतालमा छोटो समयमा धेरै बच्चा जन्मिने कीर्तिमान कायम भएको छ । द एन्ड्रयू वुमन हस्पिटलमा गत जुन २४ देखि २८ को कुल ९१ घण्टाको बीचमा १०७ जना बच्चा जन्मिएका हुन् । उक्त अस्पतालमा यसअघि हरेक दिन औसतमा १६ जना बच्चा जन्मिने गरेकोमा सो चार दिनमा १०७ बच्चा जन्मिए । विज्ञापन […]